जनताको भाग्य र भविष्यमा फोहोर गर्ने हक नेकपा नेतामा छ?
नेपाल लाइभ बिहीबार, पुस २४, २०७६, १५:३३
पार्टी ह्विप र डबल अध्यक्षको निर्देशनका कारण तपाईं विरक्तिएर विष पिउनु कि पार्टी छोड्नुको स्थितिमा पुगेको खबर सञ्चारमाध्यममा पढ्दा दुःख लाग्यो। राजनीतिमा सिद्धान्त सकिएपछि, निष्ठा हारेपछि, इमानमा भ्वाङ परेपछि हुनुपर्ने कुराभन्दा नहुनुपर्ने कुरा बढी हुन्छन्। अहिले तपाईंको पार्टीमा ग्रहण लागेको छ। कमरेड मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त कमरेड राज्यलक्ष्मी गोल्छा, कमरेड दीपक मनांगे, अनि कमरेड दिनेश अधिकारी चरी लगायतले भान्सा पुछ्ने टालो बनाएपछि जबजरूपी सूर्यमा ग्रहण लागेको छ।
कमरेड प्रचण्डले झन् घनिभूत ढंगले पछिल्लो समय जबजको व्याख्या गर्न थाल्नुभएको छ। नेकपाको नामसँगै पहिले-पहिले मार्क्सवादी, लेनिनवादी र माओवादीजस्ता फुर्का जोडिन्थे। अहिले नेकपा यति को फुर्को जोडेर पुच्छ्रे भएको छ। ज्योतिषशास्त्रअनुसार ग्रहण लागेको बेलामा थोरैलाई मात्र लाभ र धेरैलाई हानी पुग्ने मान्यता छ। तपाईंको पार्टी र सरकारमा यति बेला राहु पनि पसेको छ, त्यसैले काम भन्दा नकाम धेरै, नाम भन्दा बदनाम ज्यादा सुन्न र देख्न पाइन्छ।
केवल चुनावी नतिजा हात पार्न भएको सिद्धान्तहीन गठजोड, सम्झौता र लेनदेनमा देश र जनताको भाग्य र भविष्य हेरिएको हुँदैन/छैन। केही सीमित व्यक्तिको लाभहानी मात्र हिसाब गरिएको पार्टी एकीकरण र चुनावी तालमेलमा जे सम्झौता भएको हो, त्यो अब प्रकट भएको छ। लगानी र बिउ अनुसारको फल लागेको छ। पार्टीरूपी बालीमा अनगिन्ती कालीपोके र फोस्रोपन छ।
राजनीतिमा चुनाव हार्न/जित्न सकिन्छ तर निष्ठा हारियो र सिद्धान्त च्यूत बनियो भने त्यसले पैदा गर्ने शर्मनाक स्थिति किंकर्तव्यविमूढताका प्रष्ट उदाहरण हुन्। जुन नियति आज तपाईंहरु भोग्दै हुनुहुन्छ, त्यो संघीयताको मर्म र भावनाभन्दा पर छ। प्रदेश सांसदको हक कुण्ठित हुने खालको छ। तपाईंको पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले गरेका निर्णयले पार्टीको तल्लो तहको अधिकारमाथि बज्रपात गरेको छ। पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्ने, मत र विचारप्रति असहमत हुनेले पार्टी छोडे हुन्छ भनेर जुन धमास दिइएको छ, त्यो चरम अलोकतान्त्रिक र निरंकुशता हो। पार्टीमा दुई भाइ (अध्यक्षहरू)को हुकुमप्रमांगी नै सबथोक हो भने प्रदेशसभाका सांसद केवल भरिया, गोठाला र विवेकहीन नमकको सोझो मात्रै सोच्ने दुईखुट्टे प्राणी मात्रै हुन् त?
प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभा बैठक र प्रक्रियाभन्दा पहिले पार्टीको फर्मानमा तोकिनु निश्चित रुपमै लोकतन्त्रको उपहास हो। संघीयता भनेको केन्द्रीकृत शासन पद्धति होइन, स्थानीय स्तरबाट निर्णय हुने, योजना बन्ने र कार्यान्वयन गर्ने पद्धति हो भनेर पार्टीका शीर्ष नेतालाई बुझाउन सिद्दान्तनिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ताले विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको छ। विद्रोह गर्दा पद, पार्टी र लाभहानी हुन सक्छ तर इमानमा डडेलो लगाएर पार्टीको पद र प्रतिष्ठा तपाईंका हकमा आवश्यक छैन। पटकपटक सांसद, मन्त्री र पार्टीको पदाधिकारी बनेको र अवसर लिएको मान्छे अब पनि पदको लोभ कति गर्नुहुन्छ? पदको लोभ गरेर नै प्रदेसभामा पनि झर्न राजी हुनुभयो, त्यहाँ पनि नेताको हस्तक्षेप सहेर बस्न किन मञ्जुर हुनुहुन्छ? विष नपिउनुस् बरु पार्टी छोड्नुस्। पार्टी छोड्दा तपाईको निष्ठा बच्छ। निष्ठा बचाउनु ठूलो कुरा हो। निष्ठा र इमान धेरैमा नहुने भएकाले यो अमूल्य र अनुपम हुन्छ।
तपाईंलाई थाहा छ गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद साथीका लागि सिफारिस गरे। कांग्रेसलाई त्यो हैसियत प्रदान गर्न आजीवन लागे तर कांग्रेस विचलनमा गएपछि उनले पनि कांग्रेस परित्याग गरे। तर उनको मर्यादामा कमी कहिल्यै भएन। केही लोभीपापीले मानमर्दन गरे होलान् तर जनताले दिने मर्यादा र सम्मानमा कति पनि कमी रहेन। निष्ठा, इमान र सिद्धान्त ठूलो हो लाभ, लोभ र पद भन्दा।
नेपाली राजनीतिका अर्का आदर्शपुरुष कृष्णप्रसाद भट्टराईले कांग्रेस छोड्लान् भन्ने कल्पना सायदै कसैले गरेका थिएन। कांग्रेसले आफ्नो जन्मसिद्ध नैतिक र सैद्दान्तिक धरातल बिर्सेको भन्दै उनले पनि पार्टीको मोह त्यागिदिए। निष्ठा र इमानमा लागेको चोट मुटुमा साँचेर बसे। सिद्धान्तच्यूतहरूको अपमान पचाए। तर जनस्तरमा मर्यादाहीन भएनन्। मर्यादा पद र पहुँचले भन्दा व्यक्तिको निष्ठा आचरण, आदर्श सिद्धान्त र व्यवहारले निर्धारण गर्छ। निष्ठा, इमान र सिद्धान्त मर्यादाका मानक हुन् तर पद मर्यादाको मानक बन्छ र हुन्छ भन्ने छैन।
मुलुकको हितका लागि व्यक्तिको आदर्श र व्यक्तिले देखाउने त्याग र समर्पणको महत्त्व र गरिमा महान हुन्छ। तपाईको पद गुमे पनि प्रतिष्ठा रहन्छ भने पद होइन, प्रतिष्ठा लिएर बाच्नुस्। सँधै मरिरहनु पर्ने बधुवा मजदुरको पार्टी राजनीति र जिन्दगीभन्दा स्वतन्त्र निर्भीक र निष्ठाको जिन्दगी उत्तम हुन्छ। अब तपाईं आफै रोज्नुस् दासत्व कि स्वतन्त्र अस्तित्व?
राजनीतिमा लागेकाहरूको विवेकको भाँडोमा बिर्को लागेको हुन्छ, नेताले जे भन्छन्, त्यही मान्छन् भन्ने आम धारणा बदल्न पनि केही मान्छेहरूले त्याग गर्नु र विद्रोह गर्नु राजनीतिमा सत्कर्मले लाग्नेहरूको लागि उदाहरण हो। सार्थक जिन्दगी जिउन सार्थक पहल र त्याग जरुरी हुन्छ। यतिबेला मैले स्मरण गराउनै पर्ने हुन्छ, डा गोविन्द केसीझैँ निस्वार्थ जोगी जिन्दगी बाँचेर देश र राष्ट्रका लागि भोकै मर्ने संकल्प गर्ने मान्छेलाई पागल र मरे हुन्छ भनेर छुद्र टिप्पणी गर्ने तपाईं त्यो दुर्वाच्यको पापबाट उन्मुक्ति रोज्न पनि केही जनपक्षीय निर्णय गर्न तपाईंको आत्माले रहर गरोस्। ता कि पश्चाताप गरेर बस्न होइन, सुध्रन सकियोस्। पार्टीको बधुवा कमाराकमारी हुनुभन्दा स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने हैसियत देखाउनुस् पाण्डेज्यू। हिजोको भूल, त्रुटि र असक्षमताले क्षमा पाउनेछ।
पद्धति र प्रणाली बलियो भयो भने भोलिको पुस्ताले गुनासो गर्ने ठाउँ कमै पाउँछ। त्यसैले नैतिक मूल्यसहितको पद्धति बसाउन नैतिक लडाईं गर्नुस्। पद र पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो सम्झनुस्। जीवनको उत्तरार्द्धमा लोभ होइन, त्यागको नमूना प्रस्तुत गर्नुस्। दुर्गन्धित स्थान सके सफा गर्ने हो, सकिँदैन दुर्गन्ध त्याग्ने हो। दुर्गन्धित, फोहोर ठाउँमा बसेर रोगाउनु ठिक छैन। जान्दाजान्दै पक्कै त्यहाँ बस्ने आत्मघाती बाटो रोज्नुहुने छैन। अब पनि तपाईंहरूमा विवेक देखिएन, आफ्नो ब्रह्मले देखेको सत्य अरुको स्वार्थक लागि झुट भन्न थाल्नुभयो, विवशता देखाउनुभयो र पार्टी अनुशासनको प्रलाप गर्नुभयो भने तपाईं कहिल्यै विश्वासयोग्य नेता बन्न लायक हुनुहोला भन्ने लाग्दैन।
विश्वास गुमाएपछि फेरि आर्जन गर्न एक मात्र साधारण मानिसको आयु पर्याप्त हुँदैन। तपाईसँग पनि असाधारण आयू छैन, त्यसैले ब्रम्हसत्य बोल्नुस्। ब्रह्मको आदेश पालना गर्नुस्। नेताहरूको आदेश त आजसम्म पालन गर्नुभएकै छ। अब ब्रह्मको आदेश मान्नुस् ब्रह्मले धोका दिँदैन कहिल्यै पनि। सत्य र स्वधर्मका लागि एन्टी-करेन्ट बहने सामर्थ्य राख्नुपर्छ।
हुल/भिड र बलको आदेशविरुद्ध सत्य र न्यायको पक्षमा जो उभिन्छ, ढिलो होला तर उसको निष्ठा पराजित हुँदैन। सहास गर्नुस् नेता/राजनेता परिवर्तन हुने सौभाग्य मिल्छ। हाँसेर दिएको आशिर्वादमा होइन रोएर दिएको श्रापमा बल हुन्छ। क्षेत्रीय सन्तुलन, भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधिको राय सबै कुरालाई विचार गर्दा प्रदेश ३ को प्रादेशिक राजधानी हेटौंडा कुनै पनि मानेमा उचित छैन। नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाको निर्णयलाई नै आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाउने हो भने शेरबहादुरका हरनिर्णयको विरोध गर्ने वैधानिकता र नैतिकता रहन्छ र कमरेड?
तपाईं त्यो लेबलको नेता, जसको देशभर ठूलो नाम छ, पहिचान छ। तर तपाईंहरूको त यस्तो हालत छ भने अरू सामान्य नेता/कार्यकर्ताको नेकपाभित्र कस्तो मनोदशा होला? नेता/कार्यकर्ताका साथै जनताको भाग्य र भविष्यमा फोहोर गर्ने हक सीमित नेताको हातमा हुनु के न्यायिक छ? प्रायोगिक छ? आत्मसम्मान र स्वाभिमान बन्धक बनाएर नेताको कारिन्दा मात्रै हुनु जनताको लागि गरेको राजनीति हो र कमरेड?
नेताहरुको दम्भ, बलमिच्याईं र अदूरदर्शी नीति चकनाचुर बनाउन र होस खुलाउन यदाकदा विद्रोही प्रवृत्तिको खाँचो हुन्छ। त्यो खाँचोको नेतृत्व यो पटक राजेन्द्र कमरेडहरूले पूर्ति गर्नु पर्नेछ। पार्टीले लिने निर्णय र उसको कार्यक्षमताको प्रभाव नेताकार्यकर्तामा मात्रै पर्दैन। देश र तमाम जनतामा पर्छ, तसर्थ नेकपाबारे बोल्ने हक जनताको लागि पनि छ। त्यसैले यो सुझावको खेस्रो कोरेको हुँ। राज्यको पुनर्संरचना भनेको केन्द्रको तोक/आदेश जस्ताको तस्तै पालन गर्नु हो कि?
जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको छलफल, बहस, भावना र चौतर्फी बहसपछिको निचोडलाई व्यवहारिक र कानुनी रुप दिनु हो? वनप्रतिनिधिले पार्टीको ह्विपभन्दा जनताको आस्था र विश्वासको ह्विपलाई स्वीकार गर्नुले राजनीतिक सिद्धान्तले विजय प्राप्त गर्दछ। जनताको आस्था, भरोशा र विश्वासभन्दा ठूलो ह्विप अरू हुन सक्तैन तसर्थ पार्टीका नेताको आदेश सिरोपर गर्ने कि जनताको आवाजलाई अवज्ञा गर्ने? रोजाई तपाईको। टीका माटोको लगाउने कि नेताको हातको अबिरको? देशभक्तका लागि त देशको माटो नै पवित्र चन्दन हो। भौतिकवादीहरू चन्दनको पवित्रतामा विश्वास गर्दैंनन् तर रातो अबिर लाउनेले देशको माटोलाई अबिर सम्झिए हुन्न र? यतिका वर्ष आफ्नो लागि राजनीतिमा व्यतित गर्नु भयो। अब देशका लागि पनि सोच्नुस् र देशको माटो समाएर कसम खानुस्। कमरेड मलाई पार्टी होइन देश ठूलो छ भनेर।
मैले मेरो ब्रह्मको कुरा लेखे तपाईं आफ्नो ब्रम्हलाई अन्याय नगर्नुस्। यो देशको माया तपाईं जतिकै मलाई पनि छ। तर तपाईं माया गरेर देखाउने हैसियतमा हनुहुन्छ सो प्रदर्शन गर्नु होला। अन्यथा भए क्षमा मागेँ। सदा तपाईंको भलो चाहने। संजीव।